Mareykanka oo digniin kasoo saarey banaanbaxa Muqdisho - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaMareykanka oo digniin kasoo saarey banaanbaxa Muqdisho
Mareykanka oo digniin kasoo saarey banaanbaxa Muqdisho
Dowladda Mareykanka ayaa muwaadiniinta haysata dhalashada dalkeeda uga digtay inay maalinta Jimcaha qayb ka noqdaan banaanbaxa ka dhici doona Daljirka Daahsoon. Qoraal kasoo baxay safaaradda Mareykanka ayaa lagu yiri “Marka la eego halista dambiyada rabshadaha wata iyo kacdoonka shacabka, muwaadiniinta Mareykanka waa inay ka dheeraadaan dibad-baxyadan iyo dhaq-dhaqaaq kasta oo dibad-baxa la xiriira.”
Dhanka kale, qoraalka ayaa si dadban waxa fartiin dahsoon loogu diray kooxaha hogaaminaya mudaharaadkaas, taas oo ah in ayagu mas’uul ka yihiin hadii dhiig ku daato mudaharaadkaas. Hadalka Maraykanka ka soo yeeray ayaa ah mid aan loo qaadan karin si fudud, waxaana macquul ah in qaar kamida madaxdii hore loo aqoonsado qaswadaal ficilkooda maxkamad lagu soo saari karo mustabalka dhaw.
Safaaradda oo taa ka amba qaadaysa ayaa muwaadiniinteeda u jeedisay talooyin ay ka mid yihiin inay ka fogaadaan goobtaas, la socdaan wararka warbaahinta gudaha, ka dheeraadaan meelaha dadka badan oo aysan is-muujin, ayna gacanta ku haystaan baasabooradooda si ay u u tusi karaan haddii loo baahdo.
Digniinta Mareykanka ayaa imaneysa ayada oo cabsi xooggan ay ka jirto in banaan-baxa mucaaradka uu isku rogo rabshado xilli dowladda Soomaaliya ay isku dayeyso inay ka hortagto, kana hor-istaagto shacabka inay muujiyaan aragtidooda. Dowladda ayaa qoraal ay shalay soo saartay ku mamnuucday isu-imaatinka dadweynaha, ayada oo qiil ka dhiganeysa joojinta faafitaanka cudurka COVID-19, balse la rumeysan yahay in ujeedkeeda guud uu yahay inay baajiso mudaaharaadka, hase yeeshee mucaaradka ayaa wacad ku maray in dibad-baxa uu u dhici doono sida loo qorsheeyey, waxayna ku gacan seereen amarka dowladda.